Covid-19: Madaxweynaha Venezuela oo raadinaya dad lagu tijaabiyo tallaalka coronavirus | Gaaroodi News
Covid-19: Madaxweynaha Venezuela oo raadinaya dad lagu tijaabiyo tallaalka coronavirus
Horraantii bishii la soo dhaafay wuxuu Madaxweyne Maduro sheegay in isaga uu noqonayo qofka ugu horreeya ee la tallaalo.
Madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa shaaca ka qaaday in uu raadin doono dad si mutadawacnimo ah loogu tijaabiya tallaalka fayraska Covid-19 ee uu soo saaray Ruushka.
Ruushka waa dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah ugu dhawaaqo in uu helay tallaalka cudurka coronavirus.
Hase ahaate tallaalkan waxaa shaki geliyay khubarrada caafimaadka ama saynisyahannada kuwaas oo su`aal geliyay baahida loo qabo tijaaboyinka.
Dowaladda Venezuela ayaa balaayiin doollar oo deyn ah ka heshay Ruushka waxayna sheegtay in ay ka qayb qaadan doonto tijaabooyinka caafimaad ee tallaalkan cusub ee uu soo saaray Ruushka.
U yeeridda mutadawiciin
“Maalmaha soo socda, waxaan codsan doonnaa dad si mutadawacnimo ah loo tallaalo,” ayuu sheegay Madaxweyne Maduro.
Saynisyahannada Ruushka ayaa sheegay in tijabooyinka horudhaca ah ay yihiin kuwo guulo soo hoyay, haddana in si rasmi ah loogu dhawaaqo tallaalkan waxay ku xiran tahay in kumannaan qof tijaabo lagu sameeyo. Shaqaalaha caafimaadka waxay ka mid noqonayaan kuwa ugu horreeya ee la tallaalo.
Warbixinta Maduro ayaa muujinaysa in Venezuela aysan weli helin dad si iskood ah isu soo saaray si tallaakan loogu tijaabiyo, taas oo micnaheedu tahay in wasiirka caafimaadka Carlos Alvarado uu ka hordhacay hadalka madaxweynaha,.
Wuxuu wasiirka toban maalmood ka hor sheegay in Venezuela ay 500 oo qof u soo bandhigtay Ruushka si ay uga qayb qaatan tijaabada tallaalka.
Dowladda Venezuela ayaa sidoo kale sheegtay in ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato tijaabinta tallaallada ka dhanka ah fayraska Covid-19, oo ay soo saaren dalalka Shiinaha iyo Cuba.
Shiinaha, Cuba iyo Ruushka ayaa ah dalalka ugu dhow ee xiriirka la leh Nicolas Maduro oo ay dowladdiisu ay xiriirka u jareen in ka badan 50 dowladood oo ay ku jiraan Maraykanka iyo UK, waxayna madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsadeen ninka ay siyaasadda isku hayaan ee Juan Guaido.
Ninkan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ay mucaaradka ku badan yihiin, ayaa si iskiis ah isugu tilmaamay madaxweyne bishii Janaayo kaddib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee horseedday in Mr Maduro uu dib ugu soo laabto awoodda waxaana tallaabadaasi loo arkay mid aan sax ahayn.
Ka dib markii uu Ruushka ku dhawaaqay inay diiwangeliyeen tallaalka cudurka COVID19 oo ay ugu magacdareen Sputnik V, waxaa isla markiiba hambalyo u diray Madaxweyne Maduro.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu noqon doono qofka ugu horeeya ee la tallaalo. “Kan ugu horreeya ee la tallaalayo aniga ayuu noqon doonaa, waxaana noqonayaa tusaale”.
Si kastaba mar uu hadlayay, Madaxweyne Maduro ma uusan sheegin inuu ka mid noqon doono 500 oo qof oo reer Venezuela ah oo si iskood ah loo tallaali doono.
Venezuela waxay diiwaan gelisay wax ka yar 50,000 oo kiis oo coronavirus ah iyo 381 dhimasho ah, waana tiro aad u yar marka la fiiriyo waddamada kale ee gobolka.
Balse dhaqaatiirta waxay aaminsan yihiin in tirada intaa ay ka badan tahay maadaama aan inta badan shacabka Venezuela laga baarin cudurka coronavirus. Waxaa sabab u ah cabsiga la xiriirta faquuqa ka dib markii dowladda ay qoxootiga soo noqonaya ku eedeysay faafitaanka Covid-19.